Deutsche Bank တို့ပထမဦးဆုံးအအစုလိုက်အပြုံလိုက် layoffs အစအဦးကျဆင်းမှုအထိမ်းအမှတ်? မာတင် Vrijland
Deutsche Bank တို့ပထမဦးဆုံးအအစုလိုက်အပြုံလိုက် layoffs အစအဦးကျဆင်းမှုအထိမ်းအမှတ်?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 10 2019 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
ဖြစ်နိုင်သငျသညျပေးထားပြီ Deutsche ဘဏ် (DB) မှာအစုလိုက်အပြုံလိုက် layoffs ။ ကြေညာလက်ခံရရှိတနင်္လာနေ့န်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏၎င်းတို့၏နှုတ်ထွက်စာစာတစ်စောင် unceremoniously နှင့်တတျနိုငျသ ချက်ချင်းအဆောက်အဦးစွန့်ခွာ။ အကြီးမားဆုံး downsizing လန်ဒန်နဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီစံချိန်, ဒါပေမယ့်တခြားနေရာကမ္ဘာပေါ်မှာထောင်ပေါင်းများစွာလွဲချော်သွားတာခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်း 18.000 မှာသူတို့ရဲ့အလုပ်ငွေသွင်းနိုင်နှင့်စုစုပေါင်းလျှော့ချရေးလာမည့်နှစ်တွင် 74.000 န်ထမ်းကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ သာအားလုံးလန်ဒန်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, ဒါကအပြည့်အဝအတော်လေးတစ်ဦးဘောလုံးအားကစားကွင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသင်တန်း၏ကြီးမားဖြစ်ပါသည် 3000 န်ထမ်း တစ်ဦးအလုပ်သစ်၏အခွင့်အလမ်းအထူးသဖြင့်အကြီးစားမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုတ်တရက်၎င်းတို့၏ပေါင်နှံသို့မဟုတ်ငှားမဆပ်နိုင်ပေမည်။
ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်ရုတ်တရက်စီးပွားရေးလည်းဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအရအချိန်ကဖြတ်ဖို့စတင်ကြောင်း, ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သောင်းချီအလုပ်သမားသန်းပေါင်းများစွာ၏ရုံသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိရေစက်မဖြစ်ကြောင်းဤကဲ့သို့သောဘဏ်ထဲမှာဆက်ဆံကြောင်းဘီလီယံ၏ရာပေါင်းများစွာလိုပဲ။ ငါ့အဘို့အမျှကျနော်တို့ရုံအနည်းငယ်ထပ်တိုးရရှိသွားတဲ့ညာဘက်ပြီးသားစီစဉ်ထားအကျပ်အတည်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်အင်္ဂလန်အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 65 လူဦးရေသန်းအားလုံးအတွက်သူများအနည်းငယ်တထောင်ယောက်ျားကယ့်ကိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုမဟုတ်, ကျနော်တို့ snowball အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှော့မတွက်မထားရပါသည်ဟုဆိုနိုင်ပေမဲ့။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပ်တန့်နေသည်။ The Guardian ကဆိုသည် နောက်ဆုံးဇူလိုင်လအပေါ်3။ အောက်ပါ:
အဆိုပါစိတ်ပျက်ဖွယ်တစ်ဦးမျှမ-သဘောတူညီချက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေဖြတ်အောင်လုပ်ရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနစ်နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး, တစ်ဦးကျုံ့ (အစီရင်ခံစာများတိကျစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖျော်ဖြေ) ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်းတွေ့ကြုံ။
ဗြိတိန်အတွက်ကြီးစိုးန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်တိုးတက်မှုဇွန်လအတွင်းက virtual ရပ်တသို့ရောက်ကြ၏။ ဤအကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ပြောင်းပြန်ဦးတည်ဇောက်ချပါဝင်လာရာအတွက်တစ်လလူတွေများအမြင်အတည်ပြု။
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများဇွန်လဖို့အတွက်သုံးလအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအကြံပေးခန့် 0,1% IHS Markit နှင့်လစဉ်စစ်တမ်းနှစ်စဉ်ပြုစုပေးသောပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေး (CIPS) ၏ Chartered ဘဏ်ဟာအင်စတီကျု, အရသိရသည် shrank ။
စီးပွားရေးကွင်း၏ကနျြးမာရေး၏နှိုးဆော်သံယခုဗြိတိန်နိုင်ငံ 31 အောက်တိုဘာလမတိုင်မီအီးယူမှထွက်ခွာရန်မျှော်လင့်ထား။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလျင်မြန်စွာတတိယသုံးလပတ်အတွင်းပြောင်းပြန်မထားလျှင်, တိုင်းပြည်ပြီးသားယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲစီးပွားရေးကျဆင်းမှုသို့သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုအဖြစ် US မှာအဆိုပါကိန်းဂဏန်းများပိုများနေကြ alt-market.com (ကိုဖတ်ရှုဖို့ကိုနှိပ်ပါ):
ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ရာစျေးကွက်အဖြစ် Key ကိုညွှန်ကိန်းများရောင်းအား 7,8% အတွက်အထွေထွေကျဆင်းမှုနှင့် 8,1% တစ်ကျဆင်းခြင်းခံစားခဲ့ရသည်။
ကျနော်တို့စားသုံးသူကြွေးမြီများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကြွေးမြီ၏သမိုင်းဝင်အဆင့်ဆင့်ကိုကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့အကြီးအကျယ်စတိုးဆိုင်ပိတ် (ဒီတစ်နှစ်ယခုအချိန်အထိထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် 7100 ပိတ်ပစ်ထက်ပို), ရေကြောင်းနှင့်ကုန်တင်အပေါ်တစ်ဦး debilitating ရပ်တန့်ခြင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ PMI အတွက်နိမ့်ဆုံးအမှတ်, 2009 ကတည်းက US မှာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကတည်းကအနည်းဆုံး PMI တွေ့မြင် နှင့်နှောင်ကြိုး-ဂရပ်, စတာတွေအတွက်ပြောင်းပြန်
စီစဉ်ထားတဲ့အကျပ်အတည်းသည်ထိန်းချုပ်အတိုက်အခံများ၏ဖိနပ်အတွက်ကျဆင်းမှုများအတွက်အပြစ်တင်ခံရမည်တံ့သော: 'သော Self-ဖန်တီးပိုင်ခွင့်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများဤအတူထိုကြောင့်ငါတို့သည်တကယ်ငါဤမျှကာလပတ်လုံးထို site ပေါ်တွင်ဟောကိန်းထုတ်ကဒီမှာခဲ့တာတဲ့အချက်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း တိုင်းပြည်ကိုပထမဦးဆုံး "သောသဘောထားယူဆချက်။ ကြောင်းအမျိုးသားရေးဝါဒ, ကာကွယ်ရေးနှင့် (ထိန်းချုပ်ထားအတိုက်အခံများကအဓိပ်ပါယျအခြေချနေထိုင်နိုင်နိုင်အောင်ဒီဖြစ်စဉ်, သတိသည်နှင့်အသီးသီးအမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်၌အာဏာလာခဲ့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာ, စီစဉ်ထား, Trump နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲစီးဆင်းမှုပြီးတော့စီးပွားရေးကို crash ) 'ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွေးများကို' နှင့်လူဦးရေ၏ကျန်ဤအုပျစုကိုယခုအခါနှစ်ပေါင်း '' 40 / '45 အဖြစ် NSB ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဤလမ်းမျှော်မှန်း (နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစီစဉ်ထား) ပရမ်းပတာထံမှအသစ်သောအမိန့်လုံးဝဖွင့်လှစ်သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ငါတို့မျက်မှောက်၌ဆက်ရေးမြင်နေပါတယ် "ဟု Ordo ab Chao" ၏ (ပရမ်းပတာထဲကအမိန့်ဖန်တီး) အဟောင်းရောမဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဝေဖန်မှုများများအတွက်မျက်စိရှိသည်ရှိသည်, လောကအစိုးရတည်ဆောက်ချင်တယ်။ သင်သည်အဘယ်သို့အဖြစ်ရှင်းလင်းစွာတတ်နိုင်သမျှတစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေ၏လှာအပေါ်ဝေဖန်မှတ်ချက်ထားရှိရာသာချွတ်ဒီတော့နောက်ဆုံးမှာစီးပွားရေးကပ်ဘေးသို့ကမ္ဘာကြီးကိုထိုးခြင်းနှင့်ရန်, ကြီးထွားဘူးသင်ပထမဦးဆုံးအာဏာကိုအမြတ်အရေးပါသောအဖွဲ့ကိုလုပ်နေတာထက်ပိုကောင်းနှင့်ထောက်ခံသူများဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒီဝေဖန်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူကိုင်တွယ်နည်း အဲဒီထိန်းချုပ်အတိုက်အခံများ၏ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင် Truman Show ကို-အဖြစ်မှန်၌နေသောဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံစတင်အချိန်ရှိ၏ ကမ္ဘာကြီးဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဇာတ်ညွှန်းအရသိရသည် run, နှင့်အုပ်စုငယ်တစ်ဦးအခြို့သောဦးတည်ချက်ပေးပို့ဖို့ဒီ script ကိုအဘို့အထိပ်မှာထိန်းချုပ်ထားကြောင်းကြောင်း။ ငါပြီးသားဤနေရာတွင်ဤဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထို site ပေါ်တွင်ကစားရန်သောရိုးရှင်းသောတကယ်တော့, ဒဏ္ဍာရီကိုကြွေးကြော်မရှိသည့်အရိပ်အယောင်ဖြစ်သင့်သည်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုခြေရာခံနိုင်မမဆိုဖှံ့ဖွိုးတိုးဒီနေ့စဉ်သက်သေပြတတ်၏။ တစ်ခုတည်းသောဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသင်တပြင်လုံးကိုတစျဆငျ့မသွားမီနိုးလှုပ်ခါရန်ကြာဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအယူမှားအဖြစ်မှန်နှင့်ဇာတ်ညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. အရာရာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် ဤဆောင်းပါးတွင် ထိုသို့ဆောင်းပါးတွေနဲ့ဆက်နွယ်။ သင်က ယူ. နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြန်လေ့လာ။
source link ကို entries တွေကို: zerohedge.com, theguardian.com, အဆိုပါ guardian.com
Nigel Farage, ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲတစ် psyop အာဏာလေဟာနယ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးပရမ်းပတာခဲ့သည်
Tags:: အကြပ်အတည်း, DB, Deutsche ဘဏ်, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အစုလိုက်အပြုံလိုက်, ပစ်ခတ်, ဆုတ်ခြင်း
10 မှဇူလိုင်လ 2019 12: 24
ဤအတောအတွင်းပုံမှန်အတိုင်းနည်းပညာအသစ်အတွက် 13 ဘီလီယံကိုဒါ pompen..geld ခဲ့သည်
11 မှဇူလိုင်လ 2019 11: 09
အထက်ပါဆောင်းပါး၌ငါသန်းပေါင်းများစွာ၏အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သောင်းချီအကြောင်းပြောဆို။ သငျသညျကလူ 18k နှင့်သက်သာရာလျှင်ဝန်ခံရမည်, သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးတန်ဖိုးထားအကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့နှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ 1.8 ဘီလီယံခန့်ကြောင်းတစ်နှစ်လျှင်တစ်ဦးတစ်တန်ကိုပျမ်းမျှကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့နောက်ဆုံးတွင်စာတမ်းများအတွက်အများကြီးသော်လည်းလမ်းလျှောက်ပိုပြီးလူတွေကိုလွှတ်သောအခါ။ သငျသညျ, သို့သော်, ဤလူအပေါငျးတို့သညျဤအချိန်လုပ်နေခဲ့ကြသောအရာကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ရသည်မှာသူတို့မထိခိုက်ဘဏ်၏နေ့စဉ်လုပ်ရပ်များ, အလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မှအခြားတာဝန်များကိုနှေးကွေးစောင့်ဆိုင်းရပါမည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ ... တယောက်ကိုတယောက်တနေ့ကနေသွားနှင့်, အရှင်နိုင်အောင်သာသနာများမှာ ပုံအဘယ်သူမျှမဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှု။ ဤလူဟာသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းကောက်ဖို့အားလုံးကိုအချိန်ရှိသနည်း
10 မှဇူလိုင်လ 2019 13: 30
အဆိုးမြင်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအတွက်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်အမှုအရာကျွန်နောက်ဆုံးတွင်ဇာတ်ညွှန်းထဲကနေယောက်ျားတွေဆန့်ကျင်သည်နောက်တဖန်ပြုမူသွားသောပိုပြီး "ဖွယ်ရှိ" လှန်ပေးသည်။ ကျွန်ကအရမ်းကောင်းသောရှိသည်နှင့်ယခုကြင်အားလုံးချွတ်စောင့်ပါ။
10 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 03
သင် soulless လူကိုအပျေါမှာငါ့ယခင်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုပါက, သင်တို့သည်နောက်အခွင့်အလမ်းလည်းကြီးမားသောဘဏ္ဍာကိုရှိ
10 မှဇူလိုင်လ 2019 15: 04
အခွင့်အလမ်း 0% ဖြစ်ပါတယ်။
10 မှဇူလိုင်လ 2019 16: 38
ကျနော်တို့ကအများဆုံးဖြစ်ကောင်း DB, ဗဟိုစီစဉ်တစ်ခုကြိုတင်အစီအစဉ်မှာစတင်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဤနေရာတွင်ရှိသည်။ နေအောက်မှာအသစ်သောအဘယ်အရာကိုမျှ, ထိုကဒ်များကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့ rumble ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကွာအဝေးကနေကြည့်ပါ။ (အပေါင်ခံ / အပေါင်ခံ / သူတို့၏အပါအဝင်) ကြွေးမြီပေါ်တွင်တည်ဆောက်အနေနဲ့စီးပွားရေးကိုပျက်ကွက်ဖို့ခြောဖြစ်ပါတယ်။
« စာသား soulless သင်တို့ပတ်လည်လူအတော်များများ (သက်မဲ့အလောင်း)?
အတ္တဟာ autopilot လူ့ကိုယ်ပွားဇီဝစက်ရုပ်ဖြည်သော AI အအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် »